Izingqungquthela kanye Nemicimbi - I-Foundation Foundation
Ikhaya Izinkomfa nezenzo
I-Reward Foundation isiza ukuqwashisa ngentuthuko ebalulekile yocwaningo kwezocansi nobudlelwano bothando kanye nezinkinga ezilethwe izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi. Lokhu sikwenza ngokubamba iqhaza ezingqungqutheleni nasemicimbini, ngokufundisa nangokunikela ekubonisaneni nohulumeni nezimboni. Leli khasi livuselelwa nezindaba lapho ungabona futhi uzwe khona iReward Foundation.
8 February 2020. UMary Sharpe wethule iseshini ngo I-Porn, Ubuchopho nokuziphatha Kobulili Okuyingozi e-Association for the Treatment of Sexual Addiction and Compulsivity conference eLondon.
18 Juni 2020. UMary Sharpe wethule Amasu okungewona ezobuchwepheshe wokuvikela izingane ezithombeni ezingcolile: Ukusebenzisana nabachwepheshe Engqungqutheleni eyi-Age Verification Conference.
23 Julayi 2020. Ingqungquthela ye-CESE Global lapho uDarryl Mead akhulume khona Umgwaqo wendlela yocwaningo lwesikhathi esizayo ekusetshenzisweni kwezithombe zobulili ezingcolile eziyinkinga.
27 Julayi 2020. Ingxoxo yephaneli yeCESE Global Summit ngomhlaka Ukuthatha i-Big Porn: Ukudalula Ukuhlukunyezwa, Ukushushumbiswa Kwezocansi, kanye neHarms. UMary Sharpe ukhulume noLaila Mickelwait ovela kuEksodus Cry noRachael Denhollander, ongummeli, uthisha nombhali.
28 Julayi 2020. I-CESE Global Summit lapho uMary Sharpe akhulume khona Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi nabasebenzisi abane-Autistic Spectrum Disorders kanye Nezidingo Ezikhethekile Zokufunda.
12 November 2020. Sondeza ingxoxo. Lapho uxoxa noMary Sharpe, iThe Reward Foundation neFarrer & Co LLP, eLondon. Le nkulumo yamenyelwa ukumboza ukuxhumana phakathi kokusetshenziswa kwezithombe zobulili ezingcolile nokuvikelwa kwezingane nabantu abasha.
18 Juni 2019. UDarryl Mead noMary Sharpe bahambise iphepha Ukuqondanisa i "Imanifesto yenethiwekhi yocwaningo yaseYurophu ekusetshenzisweni okunenkinga kwe-Intanethi" ngezidingo ezahlukahlukene ze imiphakathi echwepheshe neyabathengi ethintekile ngokusebenzisa inkinga yezithombe zobulili ezingcolile. Lokhu bekunengqungquthela yamazwe omhlaba ebhekele ukujwayezwa ukuziphatha i-Yokohama, eJapan. Siphinde sethula iphepha ku-Izinselele zokufundisa abafundi esikoleni mayelana nokucwaninga ngezidakamizwa zokuziphatha.
5 October 2019. UDarryl Mead noMary Sharpe bahlolisise ingxoxo ngo Ucwaningo olusha kuzithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi njengokulutha kokuziphatha okuvelayo eSociety for the Advancement of Sexual Health Conference eSt Louis, e-USA.
7 March 2018. UMary Sharpe uhanjisiwe Umthelela wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ebuchosheni obusha kumaseli amaGrey namaseli asejele: Ukuhlangabezana nezidingo ze-neurodevelopmental and cognitive yabantu abasha abasengozini. Lo mcimbi ukhiqizwe yiCentre for Youth and Community Justice eNyuvesi yaseStrathclyde eGlasgow.
5 no-6 April 2018. Engqungqutheleni Yomhlaba Wonke Yokuxhashazwa Kwezocansi eVirginia, e-USA, uDarryl Mead unikeze isibuyekezo ngomhla ka Izinkinga zobulili ezingcolile e-UK futhi uMary Sharpe wahola Umhlangano Wezempilo Yomphakathi Nocwaningo bebekhona abangaphezu kuka-80 izithunywa ezivela emhlabeni jikelele.
24 April 2018. I-TRF ihambise iphepha elihlangene ku- Ukukhulumisana neSayensi Ye-Addiction Ye-Cybersex Kwabalandeli Abakhulu kwi-5th International Conference mayelana nokuLungiswa Kokuziphatha E-Cologne, eJalimane.
7 Juni 2018. UMary Sharpe wanikeza inkulumo yomphakathi ku Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ne-Brain's Brain eLucy Cavendish College eYunivesithi yaseCambridge.
3 Julayi 2018. UMary Sharpe unikeze isethulo kwizithombe ezingcolile ezingqungqutheleni eLondon Ukuveza ukuhlukumeza ngokobulili nokuhlukunyezwa phakathi kwezingane ezikoleni: Ukwenza impendulo ye-Coherent Multi-Agency.
5 Okthoba 2018. Abakwa-TRF bethule iphepha "Ukusiza ukukhula kwezocansi okunempilo kubantu abasha"e-Society for the Advancement of Sexual Health Conference eVirginia Beach, e-USA.
20 kuya ku-22 February 2017. UMary Sharpe noDarryl Mead baya kwiNgqungquthela Yomhlaba Yase-4th Yezokwelapha Ezokuziphatha EHaifa e-Israel. Umbiko wethu wamaphepha kulo mhlangano wanyatheliswa emaphephandabeni Ukuhlukunyezwa ngokocansi nokucindezela.
2 March 2017. Ilungu leBhodi le-TRF u-Anne Darling linikeze izikhathi ezintathu zezinto ze-TRF ohlelweni lwePerth Theatre, zifinyelele izilaleli ezihlangene zabantu base-650.
19 September 2017. UMary Sharpe wethule inkulumo kubafundi abakhulu nabazali ababizwa kanjalo Kungani ukhathalela nge-Internet ye-porn for the Festival of Ideas at George Watson's College e-Edinburgh.
7 Okthoba 2017. UMary Sharpe noDarryl Mead banikezele Izithombe Zobulili Ezingcolile Ze-Inthanethi; Okudingwa Ngabazali, Othisha & Nokunakekelwa Kwezempilo ngesikhathi Usuku Lomphakathi weNhlangano Yokuthuthukisa Ingqungquthela Yempilo Yezocansi eSalt Lake City, eU.SA.
13 Okthoba 2017. UMary Sharpe noDarryl Mead banikezele Umthelela wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi empilweni yengqondo nengokwenyama yengane eya e-Edinburgh Medico-chirurgical Society.
21 Okthoba 2017. I-Reward Foundation yethule izinkulumo ezimbili kanye ne-workshop ezithombeni ezingcolile ze-intanethi engqungqutheleni yesithathu yomhlaba emndenini eZagreb, eCroatia.
16 Novemba 2017. I-TRF iholele imfundo yasebusuku e-Edinburgh I-Porn Ibulala Uthando. Umthelela Wezithombe Zobulili Ezingcolile Ze-Inthanethi kwi-Brain Yasebuntwaneni.
18 no-19 April 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead babethule umhlangano "Indlela Ehlanganisiwe Yezithombe Zobulili Ezingcolile Ze-Inthanethi Nomthelela Wazo" e-National Organization for the Treatment of Abusers (NOTA) inkomfa yaseScotland e-Stirling.
28 April 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead banikeze iphepha "Izithombe zobulili ezingcolile kuyi-intanethi nobuchopho obusha" engqungqutheleni ye-onlinePROTECT eLondon “I-inthanethi nje, akunjalo?”: Abantu abasha kanye ne-intanethi - kusuka ekuhloleni ngokocansi kuya ekuziphatheni okuyinselele kwezocansi. . Umlayezo wevidiyo kaMary Sharpe wokuthatha ekhaya ovela eNgqungqutheleni ngu lapha.
4 May 2016. Sethumele amaphepha amabili ku-Third International Congress of Technology Addiction, e-Istanbul, eTurkey. UMary Sharpe wakhuluma "Amasu okuvimbela ukubhebhetheka kwe-Internet Porn" futhi uDarryl Mead wakhuluma ngaye “Izingozi Intsha Ebhekana Nazo Njengabasebenzisi Bezithombe Zobulili Ezingcolile”. Uhlobo olude lwenkulumo kaDarryl lwashicilelwa ngokuhamba kwesikhathi kumagazini wokubuyekeza ontanga i-Addicta, otholakalayo lapha.
17-19 Juni 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead banikeze iphepha elibhaliwe "Ungaziguqula kanjani izibukeli ze-Internet Pornography zibe ngabathengi abanolwazi" engqungqutheleni ye-DGSS yocwaningo lwezocansi kwezenhlalo, "Ubulili njengempahla" eMunich, eJalimane.
7 September 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead banikeze iphepha "Ukusebenzisa ibhizinisi ukuveza izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi njengendaba yezempilo yomphakathi" Kwinkomfa Ye-International Social Innovation Research Conference (ISIRC 2016) I-Glasgow. Indaba yezindaba kule nkomfa ikhona lapha. Isethulo sethu siyatholakala kuwebhusayithi ye-ISIRC.
23 September 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead banikeze i-workshop "Umphumela wokuhlakazeka kwezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi" eNhlanganweni YeNtuthuko YeNgqungquthela Yempilo Yezocansi e-Austin, eTexas. Indaba yezindaba kulokhu ivela lapha. Ukurekhodwa komsindo kokulethwa kuyatholakala ukulanda kusuka ku SASH iwebhusayithi ngenkokhelo ye-US $ 10.00. I-Number 34 kwifomu le-oda.
29 September 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead banikeze iphepha "Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi nokuhlukunyezwa ngokobulili phakathi kwentsha: Ukubuyekezwa Kwamuva Kokucwaninga Kwamanye amazwe" e-NOTA International Conference e Brighton. Bheka QAPHELA ukuze uthole imininingwane yenkomfa. Umbiko wethu kule nkomfa ngu lapha.
25 Okthoba 2016. UMary Sharpe wethule "I-porn ye-Intanethi nobuchopho bentsha" kwezokuphepha ku-inthanethi kwezingane nentsha e-Edinburgh efakwa yi-Holyrood Events. Chofoza lapha ngombiko wethu.
29 Novemba 2016. UMary Sharpe noDarryl Mead bakhuluma "Ukuhlukumeza ngokocansi nodlame lwezocansi ezikoleni", umcimbi owenziwe e-Edinburgh yiPolitiki Hub eScotland. Umbiko wethu ngalo mcimbi uthi lapha.